Muchidzidzo ichi pamichero muChirungu, tichadzidza kuita mitsara yemitsara pamusoro pemazita emichero muChirungu, chiperengo uye kududzwa kwemichero muChirungu, uye nemanyorerwo emichero muChirungu
Isu takagadzirira zvakanaka zvinoonekwa kwauri pazasi. Zviri nyore kudzidza Chirungu nemifananidzo. Unogona kudzidza zviri nyore nyaya yemichero muChirungu nezvinoonekwa zvinonaka uye zvinonakidza. Heano akakwana maropafadzo ayo Ishe wedu akatipa. Kutanga, tarisa pamichero yeChirungu yakaratidzwa tsananguro, ipapo iwe uchaona michero yeChirungu pamwe neayo maTurkey akafanana mune rondedzero. Iwe unozodzidza zvakawanda nezve michero muChirungu sezvaunodongorera pasi pasi pezasi peji redu.
Chirungu Zvibereko (zvine Mifananidzo)
TR: Chinanazi EN: Chinanazi
TR: Mazambiringa EN: Mazambiringa
TR: Orenji EN: Orenji
TR: Limon EN: Ndimu
TR: Mufananidzo EN: Fig
TR: Apurikoti EN: Apurikoti
TR: Kokonati EN: Kokonati
TR: Muchero Wemazambiringa EN: Grapefruit
TR: Peya EN: Peya
Mazita Akawanda Akawanda eMichero muChirungu
Semumitauro yese, mazita emichero anoshandiswa zvakanyanya muChirungu. Nekudaro, zvimwe zveizvi zvinoitika kazhinji kazhinji kupfuura zvimwe. Izvi zvinoonekwa sezvizvi;
Zvinokurudzirwa kuti uzvidzidze paunenge uchishanda, kwete kuzviisa mumusoro. Nekuti kuyeuka nemusoro kunoita kuti ukanganwe, kana ukasazvidzokorora mushure mechinguva. Nekudaro, iyo nzira yese icharasikawo, kutambisa nguva pasina.
Saka, ndezvipi zvakafanana zveTurkey zvemazwi aya uye madudziro awo sei?
Zvibereko Mazita uye Kududzwa muChirungu
Musoro wemadudziro nderimwe rematambudziko makuru, kunyanya pakati pevadzidzi nevaya vatsva kuChirungu. Chimwe chezvikonzero zveizvi ndechekuti kutarisirwa kwakakodzera hakuna kubhadharwa kuchinhu. Nekudaro, kududzira kusiri iko kunogona kuve nerevo dzakasiyana mune zvimwe zviitiko.
Izvo zvakaenzana zvemichero muChirungu uye nemataurirwo azvinoita zvakaita patafura iri pazasi
Zvibereko Turkish Names Kududzwa
apuro maapuro Epil
bhanana mabhanana Kuvaka
Bhabheri Blueberries Bluberiy
kokonati Koconut Kokonati
onde maonde onde
Mazambiringa girepisi Greyp
bhuratifuru bhuratifuru Greypfuriyt
ndimu Limon Lemin
Mandarin Mandarin Mhute
nwiwa nwiwa Melın
Orenji orenji Orinc
chido muchero Chibereko chekushushikana Pamberi Furiyt
pichisi mapichisi Bastard
kotopeya Pears Peir
chihenge chihenge Paynepil
mutamba mutamba Pomegiranite
Makumi nemashanu Quince Kuins
Raspberry razibheri Razberiy
Strawberry mastrawberry Sitrowbar
Watermelon visi Wotramel
Tafura I: Zvibereko muChirungu, yavo yeTurkey uye madudziro avo
Kudzidza izvi kunozowedzera mazwi ako uye zvinoita kuti ushandise mutauro zvakanyanya.
Ndichiri kudzidza Chirungu, mazwi akakosha zvakanyanya pamwe neruzivo rwegirama. Kuti utaure chirungu chakatsetseka, zvinofanirwa kuve neshoko rakareba. Muchikamu chino, unogona kuverenga zvinorehwa nemazita emichero muChirungu uye nemashandisiro aungaita mukutaurirana kwemazuva ese.
Zvibereko zveChirungu mazwi echinyorwa Iwe unogona kuona zvinoreva michero yakanyanya kushandiswa. Rangarira kudzidza aya mazwi kazhinji, zvese nekunyora nekutaura, kuti ugamuchire zvizere kududzwa kwakakodzera. Dzidzira kutaura izwi roga roga zvinonzwika kunobatsira iwe kudzidza Chirungu zviri nyore.
Ngatitangei nekukanganisa kwese. Mune sainzi yebhotani, kuiswa kwezvirimwa semichero nemiriwo ndizvo zvinozivikanwa nevanhu vazhinji zvisirizvo. Zvibereko nemiriwo zvinotsanangurwa zvinoenderana nechikamu chemuti wavanobva. Chibereko chine mhodzi inouya kubva mumaruva ayo. Muriwo unobva pamidzi, mababu, mashizha uye madzinde emuti. Isu tinowanzotsanangudza mimwe michero iyi se "muriwo" (semuenzaniso madomasi, avocado, eggplant) asi izvi zvibereko.
Iine kukosha kwekutengesa sezvo ichishandiswawo muzvakapedzwa chikafu senge michero, jamu uye marmalade. Muchokwadi, haisi michero yese inodyiwa. Pane ino peji, iwe unogona kuwana zvakajairika michero yekicheni zvine zvadzinoreva.
Kudzidza Zvibereko muChirungu
Ive neshuwa yekudzidzira yega nyowani izwi raunosangana naro. Kunyanya edza kupindura iyi mibvunzo nezve hupenyu hwako hwezuva nezuva muChirungu.
Ndezvipi izvi zvaunofarira?
Zviri nyore here kutenga michero mitsva kwaunogara?
Ndezvipi zvibereko zvausina kumboedza?
Tora chidimbu chepepa kuti udzidzise uye nyora ndima shomanana kuti uvandudze izwi iri (zvinokubatsira kuyeuka mazwi zviri nyore). Iwe unogona zvakare kudzidzira nekutaura zvinonzwika kune iwe pachako kana neshamwari.
Zvibereko muChirungu Sentence Examples
Kune maorenji mana mudengu.
Tangerine chibereko checitrus.
Iwe unofanirwa kudya michero mazuva ese.
Ndakatenga kirogiramu yamaapuro.
Ndinoda michero yakaomeswa.
Anofarira kudya michero mitsva.
Sally anoda muto wemichero.
Chibereko ichi chine hwema hwakanaka.
Kune yakawanda miti yemichero mubindu.
Mavise chibereko chezhizha.
Kutanga, edza kushandura mitsara iri pamusoro muTurkey iwe. Wobva watarisa neinotevera kuti utarise zvikanganiso zvako. Zvinoreva mitsara nezvezvibereko zveChirungu zvinotevera.
Unofanira kudya michero mazuva ose.
Kune miti yemichero yakawanda mubindu.
Zvibereko muChirungu Mibvunzo
Ichi chii? - Iri iorange.
Iwe unofarira quince? - Hongu, ndinoda quince.
Emma anoda apricot here? - Hungu, anofarira apurikoti.
Ungada here muchero? - Hongu.
Ndeupi muchero waunofarira zvakanyanya? - Ndinoda maorenji zvakanyanya.
Unosvuura avocado here? - Ehe ndino.
Ndeupi muchero waunofarira? - Muchero wangu wandinofarira Cherry.
Yakawanda sei kirogiramu yemastrawberry?
Iko coconut inokura kupi pasi?
Unodya sei chinanazi?
Ichi chii? - Iri iorenji.
Emma anoda maapurikoti here? - Hungu, anofarira apurikoti.
Unogona here kubvisa avocado? - Hungu, ndichadaro.
Ndeupi muchero waunofarira? - Muchero wangu wandinofarira ma cherries.
Zvibereko Sample Chinyorwa muChirungu
Zvibereko zvakanyatsonaka kune hutano hwedu. Wese munhu anofanira kuzvidya zvakajairika. Kune zvikonzero zvakawanda zveizvi. Kutanga, haufanire kuvabikira. Chechipiri, zviri nyore kwazvo kuwana. Chechitatu, vane faibha iyo yakanaka kwazvo kugaya. Uye zvakare, michero ine yakaderera macalorie. Saka hausi kuwedzera uremu. Zvakare, michero inodzivirira zvimwe zvirwere zvakaita sehosha yemoyo negomarara. Kunze kweizvi, michero ine mavitamini uye mamineral. Chekupedzisira, michero ine kuravira kwakanaka kwazvo uye kunhuwidza. Iwe une zvikonzero zvakawanda zvekusanganisa michero mune yako tsika yekudya.
Uchishandisa Kuda / Usade
Kana tichiti tinoda michero kana kwete, tinoshandisa izwi rekuti "fanika" kune michero yatinoda uye "yatisingade" kune avo vatisingade.
Semuenzaniso mitsara pachinhu ichi;
I se apple / Ay lik epıl / Ndinoda / ndinoda maapuro.
iwe se quince / yu like kuins / Unoda / unoda quince.
We se sitirobheri / wi senge cytrober / tinoda / tinoda mahabhurosi.
iwe se Cherry / sweet Cherry / Unofarira / Unoda Cherries.
He se bhanana / hi kunge bınena / Anoda / anoda bhanana.
iye se orenji / shi lik orınc / Anoda / anoda orenji.
ivo se vise / Deylik malın / Vanoda / vanoda vise.
Zvino ngatipei mienzaniso yemitsara yakaipa:
I handifarire Apple / handidi maapuro.
We handifarire Hatidi quince / Quince.
He handifarire plum / Haafarire purumu.
ivo handifarire bowler / Havadi vise.
iwe handifarire peya / Iwe haudi peya.
Chirungu Zvibereko zvePuraimari Dzidzo
Kune vadzidzi vepuraimari vadzidzi, vanofarira kudzidza chidzidzo chemichero muChirungu. Kudzidza mazita emichero kunogona kunakidza zvikuru vana, heino runyorwa rwemazita emichero muChirungu aunogona kudzidzira pamwe nevana vako vadiki.
Kunyanya kune vana vekutanga uye vekuchikoro, kudzidza Chirungu kunogona kuve nyore nenziyo nemavhidhiyo. Heino chinonakidza uye chiri nyore Chirungu chibereko rwiyo mazwi tichagovana. Unogona kuimba rwiyo urwu nevadzidzi vako kana nemwana wako kuti vagone kudzidzira.
"Zvibereko Rwiyo" Lyrics
Ivo orenji uye akakomberedza ndinovada chaizvo.
Ivo vane muto uye anotapira uye anonaka kwazvo!
Maorenji akanaka kwandiri!
Mabhanana, Mabhanana, Mabhanana!
Ivo scrumptious uye vandinoda.
Iwo akakombama uye yero neganda rakakora kwazvo.
Mabhanana akanaka kwandiri!
Kune mhando dzakasiyana dzemichero.
Unogona here kududza mashoma?
Mabhanana, Kiwis, Strawberries, Peaches, maapuro.
Saka akawanda mavara, maumbirwo uye hukuru.
Cherries, Mazambiringa, Mavise, Mapeya, Mananazi uye zvakawanda!
Strawberries ndeyechokwadi yummy.
Dzinoita kuti ndide kukwiza dumbu rangu.
Ivo vatsvuku uye vane muto uye vanonaka kwazvo!
Strawberries akanaka kwandiri!
Mazambiringa Mazambiringa Mazambiringa ari muzvisumbu!
Vanouya nemavara akasiyana, Nhema, Dzvuku kana Girinhi!
Ivo vashoma kwazvo uye vanonaka, Chikafu chinonaka!
Mazambiringa akanaka kwandiri!
Ndinoda manwiwa. Ndicho chibereko chakanakisa kupfuura zvese.
kunze kune girini uye mukati mutsvuku.
Manwiwa akakura kwandiri!
Ini ndinoda Pineapple zvidimbu.
Izvo zvinonaka uye zvinotapira ndinozvida chaizvo.
Ivo yero uye yakasarudzika uye inonaka kwazvo!
Chinangwa chinonaka kwandiri!
Kunyangwe iwe uri kuyedza kutsvaga chako chaunofarira muchero musupamaketi kana uchida kutaura nezve michero ipi yaunoda uye yausingade, iwe uchafanirwa kuziva mazita emichero muChirungu. Kune akawanda mazita emichero akasiyana ekudzidza asi hazvireve kuti ibasa risingagone, unogona kudzidza zvinoreva chiChirungu chemuchero chero mupfupi nekudzidza mashoma panguva.
Sezvo iwe uchiziva, kudzidza mutauro, kunyanya Chirungu, kwawana kukosha kukuru nhasi. Chirungu chakashandiswa pasi rose ndechimwe chezvakakosha pane izvi. Mashoko ndomumwe wevabatsiri vakuru pakudzidza Chirungu. Iwo akawanda mazwi anozivikanwa, anowedzera mitsara inogona kuumbwa.
Zvibereko zveChirungu zviri pakati pezvinhu zvinotora nzvimbo hombe, kunyangwe zvingaite senge zvisina basa nguva zhinji. Nekuti michero yeChirungu inowanzo kutaurwa muhupenyu hwezuva nezuva. Kunyangwe zvichizivikanwa kuti kune michero yakawanda pasirese, mazita avo echirungu kazhinji haazivikanwe.
Mune ino kesi, dambudziko hombe rinomuka kana chirevo chine mazita emichero chikaitwa. Izvo zvinoitawo kuti zvive zvakaoma kunzwisisa chinyorwa chine mazita emichero. Saka chimwe chezvinhu zvekutanga zvaunofanirwa kuita kana uchidzidza Chirungu chibereko muChirungu. Kana iwe uchingotanga kubuda uye uchitsvaga nzvimbo yezvibereko zvese pane irongwa, ingo tarisa patafura yedu.
Kutaura kwakarurama mumitauro yese kwakakosha. Nekuti mataurirwo asiri iwo anogona kusanzwisiswa nemumwe munhu. Mune ino kesi, kutaurirana hakuzoite. Neichi chikonzero, iwe unogona kudzidza kuverenga mazwi ari mubvunzo kubva patafura yedu.
Chii Chinofanirwa Kufungwa Kana Uchidzidza Chirungu?
Kune akawanda mhosho pakudzidza Chirungu. Kudzidza kwakashata kunokanganisa maitiro ekudzidza mutauro zvakashata. Nekuti zvakaoma kwazvo kugadzirisa chimwe chinhu chisinganzwisisike. Vanhu vazhinji mazuva ano vanotora makosi ekudzidza Chirungu. Kuwana dzidziso yehunyanzvi yakadaro kunodzidzisa iwe mutauro uyu nemazvo. Nekudaro, hazvigoneke kuwana mhedzisiro kana iwe usingaedze kuzvidzidzira iwe pachako.
Kune izvi, izvo zvidzidzo zvinodzidziswa pazuva iro zvinofanirwa kudzokororwa mazuva ese uye nesimba remunhu rinofanirwa kuitwa. Kana iwe ukasiya iko kudzidziswa nemamwe mazwi, mhedzisiro yacho ichave yakaderera kwazvo.
Sei Kudzidzisa Vana Chirungu?
Kudzidziswa kwemitauro kunofanirwa kuitwa zvakasiyana pakati pezera rega rega. Kana izvi zvikasateererwa, vanhu havazokwanise kubatsirwa nedzidzo yavanowana.
Paunenge uchidzidzisa Chirungu kuvana, unofanirwa kuti chiwedzere kunakidza uye kutaridzika. Vazhinji vanhu vanofunga nezve mavhidhiyo uye echirungu makatuni pano. Nekudaro, kugona kwekudzidza nemavhidhiyo kuchadzikira, sezvo Chirungu chevana chisati chagadziriswa.
Nekuti pavanenge vachidzidza mutauro, vana vanofanira kuongorora nekudzidza izwi ravanoona. Chikonzero chikuru cheichi ndechekuti vana havagone kuteedzera zvinyorwa zvidiki nekutaura panguva imwe chete.
Kune izvi, zvinokurudzirwa kuti utenge ma comics echirungu uye mabhuku enyaya akakodzera vana. Sezvo zvinhu zvirikubvunzwa zvinoonekwa uye zvakaenzana zveChirungu zvezvinhu zvakanyorwa pazviri, kudzidza kwakanyanya kunoitwa. Semuenzaniso, kana izwi rekuti "bhanana" rikaonekwa pasi pemufananidzo we "bhanana", zvinonzwisiswa kuti chii kunyange chisina kunyorwa muTurkey.
Nekudaro, mhinduro dzinobudirira dzichawanikwa sezvo dzidzo yevana inotsigirwa nezvinoonekwa. Nekudaro, izvi ichokwadi kana vana vari vadiki kwazvo. Rutsigiro runogona kuwanikwa kubva kuChirungu mavhidhiyo uye mafirimu panguva yekuisa mumusoro mazwi pazera rakura. Nekudaro, hapafanire kuve neTurkey subtitles pano. Nekuti mune ino kesi, huropi hunongotungamirwa pano.
Uye zvakare, zvisinei nezera reboka remudzidzi, rinofanira kushandiswa muhupenyu hwezuva nezuva. Vana vadiki vanogona kubatsira zvakanyanya nekudzidzira mazwi mazuva ese nevabereki vavo. Vanhu veimwe zera boka vanogona nyore kuita izvi nekudzokorora kwemazuva ese.
Sei Kudzidzisa Chirungu kune Vechidiki?
Mifananidzo yemifananidzo inonzwika zviri nyore uye isingafadzi kwavari kana vachizodzidza mitauro yevechidiki. Nechikonzero ichi, zvakafanira kuti utendeukire kune zvido zvehunyanzvi uye kusiyanisa nzira kuti uwane kugona. Kune izvi, mutauro mutauro unokurudzirwa.
Nekudaro, zvakakoshawo kuti uwane dzidzo chaiyo iwe uchidzidza mutauro. Muzvikoro, zvidzidzo zvinofanirwa kuitwa nemazvo uye nenzira kwayo, uye basa rechikoro rinofanirwa kupedzwa pasina kunonoka. Zvikasadaro, kana ikasaitwa zvakare, izvo zvinokanganikwa, saka mhedzisiro ichave yakaderera.
Iyo zvakare mhinduro yakanaka yekuwana hunyanzvi dzidzo kunze kwezvikoro uye kunyoresa mumutauro kosi. Nekuti avo vanodzidzisa mumasangano aya vanowanzo taura rurimi rwaamai. Nekudaro, vanhu vanogona kutora zvidzidzo zvinoshanda zvakanyanya kubva kune avo vanotaura mutauro wavo. Kuisa mumusoro izwi, kune rumwe rutivi, ibasa rinoshanda iro chero munhu anogona kuita ega.
Zvisinei, izvi hazvisizvo mumamiriro ezvinhu akadai sekudzidza girama uye chimiro chemitsara. Sezvo izvi zvisingakwanise kudzidzwa zvega, zvingave zvakakodzera kuti uwane dzidziso yehunyanzvi.
Kune izvi, zvinokurudzirwa kuti uite tsvagiridzo usati wanyoresa mukosi. Nekuti kune mazhinji masisitimu anopa dzidzo yeChirungu nhasi. Nekudaro, havazi vese vane hunhu hwakaenzana. Izvo iwe zvaunoda kuti utarise pano ndezvipi izvo varairidzi vanopa kudzidziswa, zvinyorwa zvavanazvo, uye kana vachitaura mutauro wavo wekuzvarwa.
Naizvozvo, iwe unofanirwa kuongorora mutemo wezvedzidzo wesangano. Ruzivo urwu rwakanyorwa pane yavo saiti. Nhasi, mazhinji masangano nemakambani vanochengetedza avo masaiti. Pano, iye anopa ruzivo rwakadzama nezve ivo pachavo uye masevhisi avanopa. Nyaya dzakadai sekuti makosi anounzwa sei mumutauro kosi, maawa mangani uye chii chinzvimbo chekupindazve chakakosha kwazvo.
Naizvozvo, masangano mazhinji emitauro anotumira ruzivo urwu pamawebhusaiti avo. Izvo zvinokwanisika kuwana rese rinodikanwa ruzivo nekuvatarisa iwo nekuaverenga zvakadzama.
Kufunga izvi zvese zvichakubatsira iwe kudzidza michero yeChirungu neyeChirungu zvirinani. Nekudaro, havazi vese, sezvatataura, vanogumira pane izvi. Zvese izvi zvichave zvisina kukwana kana iwe ukasaedza nesimba iwe pachako.
Naizvozvo, kudzokorora mazwi wega kumba kuchakubatsira iwe kuwana kugona kukuru. Michero yatinokupa muChirungu misoro yakakosha kwazvo kuti iwe udzidze michero inoshandiswa muhupenyu hwezuva nezuva.